Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/27 Septambra 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/27 Septambra 2014
mpiambia (nitranga in-1) : Nampiseho fihetsika mampiahiahy ihany koa, tetsy andanin'izay, ny mpiambia roalahy tamina trano tsy dia lavitra loatra ireto tokantrano voatafika ireto. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
Aitel (nitranga in-1) : Tranom-barotra ny roa ary fivarotana fahana sy fandefasam-bolan'ny Aitel ny iray. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
roalahy (nitranga in-2) : Nampiseho fihetsika mampiahiahy ihany koa, tetsy andanin'izay, ny mpiambia roalahy tamina trano tsy dia lavitra loatra ireto tokantrano voatafika ireto. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
Ankasina (nitranga in-1) : Manitrisa
The post Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba appeared first on Midi Madagasikara Online. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
Andrenivohitra (nitranga in-1) : Fiara roa, Mazda sy Sprinter no nifandona tao anaty fiolanana, 121 km tsy hidirana aty Andrenivohitra. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
Novonjena (nitranga in-1) : Novonjena nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly Ampefiloha izy ary mbola manaraka fitsaboana amin'izao. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
nirongatra (nitranga in-1) : Tato ho ato, hoy ny eo anivon'ny fokontany, dia nirongatra ny vaky trano sy ny asa ratsy samihafa toy ny fanendahana sy sinto-mahery, ary manginy fotsiny ny fanolanana, noho ny fiparitahan'ny rongony, satria betsaka ny tanora mandray izany miroso amin'ny asa ratsy. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
pôtô (nitranga in-1) : 4×4 nidona tamin'ny pôtô, olona dimy naratra mafy. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
mpifanandrina (nitranga in-1) : Tsy vitan'izany fotsiny anefa fa dia nisy ny sakoroka avy eo ary lasa maromaro ireo mpifanandrina. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
vitan' (nitranga in-1) : Tsy vitan'izany fotsiny anefa fa dia nisy ny sakoroka avy eo ary lasa maromaro ireo mpifanandrina. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
Philibert (nitranga in-1) : I Berthin kosa vaky loha vokatry ny tora-bato, ary mbola manaraka fitsaboana ao amin ny hopitaly Philibert Tsiranana(CHRR-Amboanato). (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
Louis (nitranga in-1) : Ny tendrombohitr'i Pic Saint Louis, malaza amin'ny toeram-pitsangantsanganana. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
hampoky (nitranga in-1) : Dia ho tokantrano matoky an'Andriamanitra ka ho hampoky ny fahasambarana no rariana ho an'ireto mpivady vao. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
natao (nitranga in-4) : Teny amin'ny Katedraly Saint Laurent Ambohimanoro no natao ny fanamasinana ny faha-20 septambra. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
fisaboana (nitranga in-1) : Ny nahamaika ny rehetra dia ny nitondra ilay voa tany amin'ny trano fisaboana. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
Ambohidratrimo (nitranga in-3) : Tambajotra iray manontolo mihitsy no ravan'ny zandary ny sabotsy lasa teo teny Ambohidratrimo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
karàna (nitranga in-1) : Avy ny namany izay niara-dia taminy tonga dia nibata azy ary nitondra ity miaramila mamo tampona ity nody nihazo ny lalana mankany amin'ny fasan'ny karàna iny. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Betsizaraina (nitranga in-1) : nisehoana fanafihana mitam-piadiana teny Betsizaraina Ambohimangakely, ny alakamisy maraina lasa teo. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nampidirina (nitranga in-1) : Samy nampidirina am-ponja vonjimaika avokoa izy rehetra ireo miandry ny fotoam-pitsaràna azy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
voarohirohy (nitranga in-2) : Olona 11 mianadahy no voarohirohy tamin'izany. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Nisehoana (nitranga in-1) : Nisehoana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faha-4 omaly vao maraim-be. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
ahafahan' (nitranga in-1) : Soa ihany fa tao anaty fitohanana tsy ahafahan'ny fiara mandeha mafy no nanapaka tampoka ity mpitandro filaminana ity fa saika zava-doza no nitranga. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
fisavàna (nitranga in-1) : Tao anatin'izay fisavàna trano izay ihany koa no mbola nahitana karazan-taratasy maromaro efa voatapatapataka mitovy habe amina vola taratasy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
mpihazakazaka (nitranga in-2) : Namela kamboty roa i Vololona, anisan'ny mpihazakazaka lavitra ezaka iraisam-pirenena izy sy i Berthin. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
hisalasalàn' (nitranga in-1) : Nanentana ny olom-pirenena izy ireo mba tsy hisalasalàn'izay mety manam-baovao mahakasika trangan-javatra na olona mampiahiahy, hanatona azy ireo mivantana. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
nisehoana (nitranga in-3) : omaly maraina tokony ho tamin'ny 6 ora, nisehoana lozam-pifamoivoizana tany Moramanga. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
afak' (nitranga in-1) : raikitra ny sakoroka teo amin'ny samy mpivaro-kena teny Analakely, afak'omaly hariva. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
Ampitatafika (nitranga in-2) : # Malaza Ampitatafika. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
anisan' (nitranga in-1) : Namela kamboty roa i Vololona, anisan'ny mpihazakazaka lavitra ezaka iraisam-pirenena izy sy i Berthin. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
lietnà (nitranga in-2) : Araka ny fanampim-panazavana azo avy amina tompon'andraikitra ambony iray, eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena, dia voalaza fa manamboninahitra lietnà sy kapôraly eo anivon'ny Tafika Malagasy no nahazoana ireo fitaovam-piadiana ireo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Berthin (nitranga in-3) : maty tsy tra-drano i Vololona, naratra mafy i Berthin ,avotra kosa ny ain'ilay vazaha. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
tanaty (nitranga in-1) : Teo am-pandosirana hanavotra ny ainy i Vololona no latsaka tanaty hantsana lalina. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
nandravarava (nitranga in-1) : Fantatra tamin'ny alalan'ny fanadihadiana natao ary fa isan'ireo jiolahy nandravarava teny an-toerana ireto voasambotra ireto. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
nahavoarohirohy (nitranga in-1) : Hita tao amina tokantranona mpivady iray teny an-toerana ary nahavoarohirohy olona telo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
revolver (nitranga in-2) : Rehefa nidina ifotony ireo mpitandro filaminana ka nisava ny tranon'izy ireo dia tratra tamin'izany ny basy telo, PA ny iray, « revolver » ny roa ary bala niisa sivy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Mazda (nitranga in-1) : Fiara roa, Mazda sy Sprinter no nifandona tao anaty fiolanana, 121 km tsy hidirana aty Andrenivohitra. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
naheno (nitranga in-1) : Tsy nisy naheno ny zava-nitranga tamin'io alina io, hoy ny teny amin'ny manodidina, fa ny trano efa nibanaka ny maraina no nanaitra ny rehetra ary nanomboka nitangorona ny olona. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
solontenan' (nitranga in-1) : herinandro androany no nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadian'i Andry, mpanao gazety solontenan'ny Midi Madagasikara any Antsirabe, sy i Nancy izay nofidian'ny fony ho namany amin'ny fiainana. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
kapôraly (nitranga in-2) : Araka ny fanampim-panazavana azo avy amina tompon'andraikitra ambony iray, eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena, dia voalaza fa manamboninahitra lietnà sy kapôraly eo anivon'ny Tafika Malagasy no nahazoana ireo fitaovam-piadiana ireo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
dian' (nitranga in-1) : Voalaza fa lasa lalina ny dian'antsy, satria niseho mihitsy ny taolan-doha. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
ravan' (nitranga in-1) : Tambajotra iray manontolo mihitsy no ravan'ny zandary ny sabotsy lasa teo teny Ambohidratrimo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
post (nitranga in-9) : l
The post Lozam-pifamoivoizana appeared first on Midi Madagasikara Online. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nahita (nitranga in-3) : Maro ny olona nahita izany ary nanomboka nitangorona nitazana lavidavitra. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
hitsangantsanganana (nitranga in-1) : Vao tonga teny amin ny toerana hitsangantsanganana dia raikitra ny sakoroka. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
Arret (nitranga in-1) : tsy nisy tsy nanongo tena izay nahita ny zava-nitranga omaly teny amin'ny faritra Ankadimbahoaka tsy lavitra ny « Arret bus » hiakatra ny toby « Cap Sat » iny, tamin'ny 10 ora sy 10 minitra. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Raha (nitranga in-6) : Raha ny voalazan'ny mpamily an'ity fiara ity dia tratran'ny torimaso fotsy izy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
hita (nitranga in-1) : Ramatoa, izay irery tao an-trano, kosa dia nandeha niafina ary tsy hita raha tsy efa nazava ny andro. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nandrenesana (nitranga in-1) : Tato ho ato tokoa izay dia saika nandrenesana fanafihana mitam-basy iny faritra Ambohidratrimo sy ny manodidina iny. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
nasesisy (nitranga in-1) : Tokantrano roa be izao, mifanakaiky mantsy, io maraina io, tokony ho tany amin'ny 2 ora sy sasany tany no nasesisin'ireto jiolahy ireto. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nahafahana (nitranga in-2) : Raha ny fantatra dia noho ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana nisambotra olona iray, izay voarohirohy tamina resaka « mercure » sandoka, ny sabotsy lasa teo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
mifanakaiky (nitranga in-1) : Tokantrano roa be izao, mifanakaiky mantsy, io maraina io, tokony ho tany amin'ny 2 ora sy sasany tany no nasesisin'ireto jiolahy ireto. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
first (nitranga in-9) : l
nitrangana (nitranga in-1) : nitrangana fanafihan-jiolahy indray omaly alina teny amin'ny faritra 67 ha Atsimo Toeram-pivarotana telo nifanila, izay samy amoron-dalana, no lasibatra nasesin'ny jiolahy norobaina. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
000ar (nitranga in-1) : 000ar no very, raha tsy fantatra mazava kosa ny totalin'ireo zavatra very tao amin'ilay tokantrano iray. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
appeared (nitranga in-9) : l
nahavitan' (nitranga in-1) : herinandro androany no nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadian'i Andry, mpanao gazety solontenan'ny Midi Madagasikara any Antsirabe, sy i Nancy izay nofidian'ny fony ho namany amin'ny fiainana. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
nitrosona (nitranga in-1) : Manitrisa
The post Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan'ny fiara appeared first on Midi Madagasikara Online. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Tato (nitranga in-2) : Tato ho ato, hoy ny eo anivon'ny fokontany, dia nirongatra ny vaky trano sy ny asa ratsy samihafa toy ny fanendahana sy sinto-mahery, ary manginy fotsiny ny fanolanana, noho ny fiparitahan'ny rongony, satria betsaka ny tanora mandray izany miroso amin'ny asa ratsy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Online (nitranga in-9) : l
nentina (nitranga in-2) : Novonjena nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly Ampefiloha izy ary mbola manaraka fitsaboana amin'izao. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
habe (nitranga in-1) : Tao anatin'izay fisavàna trano izay ihany koa no mbola nahitana karazan-taratasy maromaro efa voatapatapataka mitovy habe amina vola taratasy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
nahatonga (nitranga in-1) : Ady izay tsy mbola fantatra ny nahatonga izany. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
nahavoa (nitranga in-1) : Tampoka teo, nisy iray naharay ny antsy fampiasany ary dia iny no nahavoa ilay maratra teo amin'ny lohany. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
Batou (nitranga in-1) : Taorian'izany, nisy ny lanonana nanasan'izy mivady ny havana aman-tsakaiza sy ny mpiara-miasa teny amin'ny Batou Beach Ambohimanambola. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
mampiahiahy (nitranga in-2) : Nanentana ny olom-pirenena izy ireo mba tsy hisalasalàn'izay mety manam-baovao mahakasika trangan-javatra na olona mampiahiahy, hanatona azy ireo mivantana. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
mamo (nitranga in-3) : Miaramila iray mamo vao mararina no nibilabila eran'ny arabe ka voadonan'ny fiara, ka nitrosina tamin'ny tany. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Ankadimbahoaka (nitranga in-2) : tsy nisy tsy nanongo tena izay nahita ny zava-nitranga omaly teny amin'ny faritra Ankadimbahoaka tsy lavitra ny « Arret bus » hiakatra ny toby « Cap Sat » iny, tamin'ny 10 ora sy 10 minitra. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
nahazoana (nitranga in-1) : Araka ny fanampim-panazavana azo avy amina tompon'andraikitra ambony iray, eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena, dia voalaza fa manamboninahitra lietnà sy kapôraly eo anivon'ny Tafika Malagasy no nahazoana ireo fitaovam-piadiana ireo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
mora (nitranga in-1) : Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa tsy hanaiky mora foana izao fahavoazany izao ilay olona maratra. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
Ampefiloha (nitranga in-1) : Novonjena nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly Ampefiloha izy ary mbola manaraka fitsaboana amin'izao. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
nasesy (nitranga in-2) : nitrangana fanafihan-jiolahy indray omaly alina teny amin'ny faritra 67 ha Atsimo Toeram-pivarotana telo nifanila, izay samy amoron-dalana, no lasibatra nasesin'ny jiolahy norobaina. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
Ambohimanambola (nitranga in-1) : Taorian'izany, nisy ny lanonana nanasan'izy mivady ny havana aman-tsakaiza sy ny mpiara-miasa teny amin'ny Batou Beach Ambohimanambola. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
nofidian' (nitranga in-1) : herinandro androany no nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadian'i Andry, mpanao gazety solontenan'ny Midi Madagasikara any Antsirabe, sy i Nancy izay nofidian'ny fony ho namany amin'ny fiainana. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
nanasan' (nitranga in-1) : Taorian'izany, nisy ny lanonana nanasan'izy mivady ny havana aman-tsakaiza sy ny mpiara-miasa teny amin'ny Batou Beach Ambohimanambola. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
volantateliny (nitranga in-1) : Ny alatsinainy maraina ihany dia nianga hanao ny volantateliny tany Nosy Be izy roa kely. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
Arivonimamo (nitranga in-1) : Naka fianakaviana teny Arivonimamo ity fiara ary teny an-dalana niverina no tratran'izao loza izao, raha ny fitantarany hatrany. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
train (nitranga in-2) : Afaka nitsambikina ilay mpandeha fa izy irery no nifatratra tany amin'ilay train. (Moramanga : Mpitondra cyclo pousse naratra mafy voadonan’ny « train », www.midi-madagasikara.mg)
Faradofay (nitranga in-3) : Io no tranga nisy tany Faradofay, ny zoma teo. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
nalay (nitranga in-1) : Avy hatrany dia ny entana teny amin'ilay vazaha no nalain'ireo jiolahy misaron-tava. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
Ambohimangakely (nitranga in-2) : nisehoana fanafihana mitam-piadiana teny Betsizaraina Ambohimangakely, ny alakamisy maraina lasa teo. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
sakoroka (nitranga in-3) : Vao tonga teny amin ny toerana hitsangantsanganana dia raikitra ny sakoroka. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
hidirana (nitranga in-1) : Fiara roa, Mazda sy Sprinter no nifandona tao anaty fiolanana, 121 km tsy hidirana aty Andrenivohitra. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
nahafantarana (nitranga in-2) : Ny vaovao voaray no nahafantarana fa avy any amin'iny lalam-pirenena faha-44 iny ilay posy ary hihazo ny “passage à niveau”. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
tokantranona (nitranga in-1) : Hita tao amina tokantranona mpivady iray teny an-toerana ary nahavoarohirohy olona telo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
ifotony (nitranga in-1) : Rehefa nidina ifotony ireo mpitandro filaminana ka nisava ny tranon'izy ireo dia tratra tamin'izany ny basy telo, PA ny iray, « revolver » ny roa ary bala niisa sivy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
rariana (nitranga in-1) : Dia ho tokantrano matoky an'Andriamanitra ka ho hampoky ny fahasambarana no rariana ho an'ireto mpivady vao. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
nianga (nitranga in-1) : Ny alatsinainy maraina ihany dia nianga hanao ny volantateliny tany Nosy Be izy roa kely. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
fifamaliana (nitranga in-1) : Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa nisy ny fifamaliana tamin'io hariva io. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
atleta (nitranga in-1) : Very atleta malaza iray i Faradofay vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
voadonan' (nitranga in-4) : Mpitondra cyclo pousse iray no voadonan'ny lamasinina. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Analakely (nitranga in-2) : raikitra ny sakoroka teo amin'ny samy mpivaro-kena teny Analakely, afak'omaly hariva. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
nahitana (nitranga in-2) : Samy nahitana fahasimbana avokoa ny fiara fa ilay kely no potika tanteraka ny lohany. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
naharay (nitranga in-1) : Tampoka teo, nisy iray naharay ny antsy fampiasany ary dia iny no nahavoa ilay maratra teo amin'ny lohany. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
raha (nitranga in-9) : Naka fianakaviana teny Arivonimamo ity fiara ary teny an-dalana niverina no tratran'izao loza izao, raha ny fitantarany hatrany. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nofinidy (nitranga in-1) : Izao ny teny avy amin'ny Soratra Masina nofinidin'izy ireo: « Satria sarobidy eo imasoko ianao sady tiako, ka hanao fanekena mandrakizay aminy Aho ». (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
Ambohimanoro (nitranga in-1) : Teny amin'ny Katedraly Saint Laurent Ambohimanoro no natao ny fanamasinana ny faha-20 septambra. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
Sprinter (nitranga in-1) : Fiara roa, Mazda sy Sprinter no nifandona tao anaty fiolanana, 121 km tsy hidirana aty Andrenivohitra. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
toromarika (nitranga in-1) : Asa izay nahavariana an'ilay mpamily fa toa tsy hitany mihitsy ireo mpiasa amin'ny lalamby efa nanisy toromarika. (Moramanga : Mpitondra cyclo pousse naratra mafy voadonan’ny « train », www.midi-madagasikara.mg)
kosa (nitranga in-5) : Tsy nisy kosa ny namoy ny ainy. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
Beach (nitranga in-1) : Taorian'izany, nisy ny lanonana nanasan'izy mivady ny havana aman-tsakaiza sy ny mpiara-miasa teny amin'ny Batou Beach Ambohimanambola. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
norobaina (nitranga in-1) : nitrangana fanafihan-jiolahy indray omaly alina teny amin'ny faritra 67 ha Atsimo Toeram-pivarotana telo nifanila, izay samy amoron-dalana, no lasibatra nasesin'ny jiolahy norobaina. (Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba, www.midi-madagasikara.mg)
amboletra (nitranga in-1) : Jiolahy efatra, tsy misaron-tava, nitondra zava-maranitra sy barre à pince, raha ny filazan'ny tompon-trano no nanao amboletra niditra tao an-trano, raha ny filazan'ny tompon-trano iray. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
hafa (nitranga in-2) : Ity olona farany ity no nanondro ireo namany maromaro hafa ka nahafahana nisambotra azy ireo avy hatrany, araka ny voalazan'ny zandary hatrany. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Antsirabe (nitranga in-1) : herinandro androany no nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadian'i Andry, mpanao gazety solontenan'ny Midi Madagasikara any Antsirabe, sy i Nancy izay nofidian'ny fony ho namany amin'ny fiainana. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
mararina (nitranga in-1) : Miaramila iray mamo vao mararina no nibilabila eran'ny arabe ka voadonan'ny fiara, ka nitrosina tamin'ny tany. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
voatapatapataka (nitranga in-1) : Tao anatin'izay fisavàna trano izay ihany koa no mbola nahitana karazan-taratasy maromaro efa voatapatapataka mitovy habe amina vola taratasy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
Naratra (nitranga in-1) : Naratra avokoa ireo mpandeha rehetra tao anatin'ireo fiara roa ireo. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
nazava (nitranga in-1) : Ramatoa, izay irery tao an-trano, kosa dia nandeha niafina ary tsy hita raha tsy efa nazava ny andro. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
nifamaly (nitranga in-2) : Raha nahita izany ireo sasany dia nisy sahy nirotsaka nanasaraka ireo nifamaly. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
tananan' (nitranga in-1) : Tsy mbola milamina ny tananan'ny oratsimba. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
The post Ankasina – 67 Ha : Toeram-pivarotana telo nifanila indray voaroba appeared first on Midi Madagasikara Online. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
tratran' (nitranga in-2) : Raha ny voalazan'ny mpamily an'ity fiara ity dia tratran'ny torimaso fotsy izy. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
Laurent (nitranga in-1) : Teny amin'ny Katedraly Saint Laurent Ambohimanoro no natao ny fanamasinana ny faha-20 septambra. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
nibilabila (nitranga in-1) : Miaramila iray mamo vao mararina no nibilabila eran'ny arabe ka voadonan'ny fiara, ka nitrosina tamin'ny tany. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
bala (nitranga in-1) : Rehefa nidina ifotony ireo mpitandro filaminana ka nisava ny tranon'izy ireo dia tratra tamin'izany ny basy telo, PA ny iray, « revolver » ny roa ary bala niisa sivy. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
naratra (nitranga in-8) : 4×4 nidona tamin'ny pôtô, olona dimy naratra mafy. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
cyclo (nitranga in-2) : Mpitondra cyclo pousse iray no voadonan'ny lamasinina. (Moramanga : Mpitondra cyclo pousse naratra mafy voadonan’ny « train », www.midi-madagasikara.mg)
Nancy (nitranga in-2) : herinandro androany no nahavitan'ny fanamasinana ny fanambadian'i Andry, mpanao gazety solontenan'ny Midi Madagasikara any Antsirabe, sy i Nancy izay nofidian'ny fony ho namany amin'ny fiainana. (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
Moramanga (nitranga in-2) : omaly maraina tokony ho tamin'ny 6 ora, nisehoana lozam-pifamoivoizana tany Moramanga. (Moramanga : Mpitondra cyclo pousse naratra mafy voadonan’ny « train », www.midi-madagasikara.mg)
Ankazobe (nitranga in-1) : # Ankazobe. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
nody (nitranga in-1) : Avy ny namany izay niara-dia taminy tonga dia nibata azy ary nitondra ity miaramila mamo tampona ity nody nihazo ny lalana mankany amin'ny fasan'ny karàna iny. (Ankadimbahoaka : Miaramila mamo, nitrosona voadonan’ny fiara, www.midi-madagasikara.mg)
Hita (nitranga in-1) : Hita tao amina tokantranona mpivady iray teny an-toerana ary nahavoarohirohy olona telo. (Ambohidratrimo : Fikamban-jiolahy mpanafika, lietnà sy kapôralin’ny Tafika no mpamatsy basy, www.midi-madagasikara.mg)
antsy (nitranga in-3) : Vokatr'izany, olona iray 26 taona no voan'ny antsy teo amin'ny lohany. (Analakely : Mpivaro-kena nifamaly, niafara tamin’ny tsindrona antsy, www.midi-madagasikara.mg)
amin (nitranga in-2) : Vao tonga teny amin ny toerana hitsangantsanganana dia raikitra ny sakoroka. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
nalefa (nitranga in-1) : Olona dimy tao anatin'ilay fiara ity no nitondra fahavoazana avokoa, satria dia naratra ary voatery nalefa haingana teny amin'ny hôpitaly. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
ahiana (nitranga in-1) : Efa samy tsy misy ahiana avokoa ny toe-pahasalaman'ireo olona naratra ireo. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
Namela (nitranga in-1) : Namela kamboty roa i Vololona, anisan'ny mpihazakazaka lavitra ezaka iraisam-pirenena izy sy i Berthin. (Faradofay : Fanafihan-jiolahy, namoy ny ainy i Vololona, mpihazakazaka lavitra ezaka, www.midi-madagasikara.mg)
imasoko (nitranga in-2) : Izao ny teny avy amin'ny Soratra Masina nofinidin'izy ireo: « Satria sarobidy eo imasoko ianao sady tiako, ka hanao fanekena mandrakizay aminy Aho ». (Mariazy : Vita ny fanambadian’i Andry sy Nancy, www.midi-madagasikara.mg)
hôpitaly (nitranga in-1) : Olona dimy tao anatin'ilay fiara ity no nitondra fahavoazana avokoa, satria dia naratra ary voatery nalefa haingana teny amin'ny hôpitaly. (Lozam-pifamoivoizana, www.midi-madagasikara.mg)
nahalalana (nitranga in-2) : Ny loharanom-baovao hatrany no nahalalana fa tsy hanaiky mora foana izao fahavoazany izao ilay olona maratra. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
Analamahitsy (nitranga in-1) : Fa mbola nisehoana fanafihan-jiolahy ihany koa teny Analamahitsy, omaly maraina. (Ambohimangakely : Tokantrano roa nasesin’ny jiolahy, mpiambina roa ahiahiana, www.midi-madagasikara.mg)
lamasinina (nitranga in-2) : Mpitondra cyclo pousse iray no voadonan'ny lamasinina. (Moramanga : Mpitondra cyclo pousse naratra mafy voadonan’ny « train », www.midi-madagasikara.mg)
www.midi-madagasikara.mg – teny vaovao 132
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/27_Septambra_2014&oldid=15480082"
Voaova farany tamin'ny 27 Septambra 2014 amin'ny 21:50 ity pejy ity.